Axmed Madoobe Oo Madaxda Somalida Ugu Baaqay Inaanan La... - iftineducation.com
iftineducation.com – Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), Madaxweynaha Maamulka Jubbaland oo maanta dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo, ayaa wuxuu ka waramay waqtiga adag ee dalku uu maraayo.
Madaxweynaha oo ka soo muuqday Warbaahinta gudaha, ayaa ka hadlay amni darrada sii baahaysa ee dalka ka jrta, joogitaanka Amisom, gacan bidixeenta Beesha Caalamka iyo isagoo Madaxda Somalida ugu baaqay inay si Somalinimo ah isugu tashadaan.
Madaxweynaha, ayaa yiri “Iyadoo ciidamo tiro badani ay jooggaan, iyadoo la leeyahay waxaasaa amniga ku baxa, iyadoo qaraash badan laga hadlayo, hadana waxaad mooddaa maalin walba amnigu uu gacanta ka sii baxaayo, uu sii hallaabaayo. Dhibka waxaan is leeyahay inta badan Soomaalidaa lug ku leh. Sababtoo ah Soomaalidu inay weligeyd sugto oo ay tiraahdo ciidamo shisheeyaa sugeynaa, inay wax noo qabtaan baan sugeynaa, inay meel na gaarsiiyaan baan sugeynaa, inay amnigayaga suggaan baan sugeynaa, waa arrin iska adag weeye. Inay iyadu xisaabtanto, isu tashato, isu xisaabtanto, ciidankoodu in la abaabulo, laga shaqeysiiyaa haboon.”
“Qolyahaan Beesha Caalamku waxaad mooddaa laba xaaladood labadaba. (1) inay ka gaabinayaan dhismihii ciidankii Somaliyeed. (2) in ciidanka Amisom ee joogga laftirkiisu dhaqaalaha uu u baahnaa iyo tabashadooda iyada lafteedu aan la buuxinin, laguna daba-gelin hawlgalkoodii iyo sidee u dhaqaaqi lahaayeen.”
“Sidaasi daraateed anigu waxaan oran lahaa Somaliya masuuliyadda ha ugu horeyso Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyaduba inay isu xisaabtamaan, oo bal amnigu dib la’isu weydiiyo.”
“Tallo ahaana waxaan ku soo jeedin lahaa Dowladda Federaalka ha noqoto ama Dowlad Goboleedyada ha noqotee, in kuligood laga qaado ciidamada Amisom ee waardiyeeynaaya, oo qolo walba ay iyadu is waardiyeeyso. Bal horta hala ogaado amnigu waxa uu yahay iyo see tahayee. Laga billaabo Villa Somalia in laga qaado ciidamada Amisom ee joogga, oo la yiraah ciidan Somaliyeed oo idin waardiyeeya dhista, oo ciidan Somaliyeed oo waardiya ah hala saaro.”